ब्रेकअपको पार्टीः पुराना निर्मातालाई देखाउन कि नयाँलाई फकाउन ? – Mero Film
ब्रेकअपको पार्टीः पुराना निर्मातालाई देखाउन कि नयाँलाई फकाउन ?
२०७५ साउन ३० गते १०:४३
दिक्षा कट्टेल : निर्माता रोहित अधिकारीले फिल्म छाडेपछि निर्माता हेमराज वीसीले द ब्रेकअप फिल्मको इन्ड क्ल्याप पार्टी धुमधामका साथ गरे । फिल्म क्षेत्रमा उनका नजिकका हस्ती र पत्रकारलाई बोलाएर भव्य पार्टी भयो ।
५ बजेलाई बोलाइएको कार्यक्रम ७ बजे सुरु भयो । ७ बजे सुरु हुनुको कारण, कार्यक्रम हलमा टाग्नलाई तयार पारिएको ब्यानर थियो । ब्यानर यति लामो थियो कि, टाग्ने ठाउँ नै सानो भयो । त्यही ब्यानर टाग्नकै लागि २ घन्टा लगाइयो । ब्यानर अलपत्रको हुँदा कार्यक्रम नै झन्डै अलपत्रको भएको ।
पुराना निर्माता रोहित अधिकारीले छाडेको कुरामै पार्टी बढी फोकस भयो । निर्देशक र निर्माता हेमराज वीसीले रोहितले छाड्नुको कारण कति लुकाए, कति देखाए ।
नयाँ निर्माताको अनुहार किन निन्याउरो भनेर पत्रकारले प्रश्न पनि गरेका थिए । जवाफ हेमराज आफैले दिए । यत्रो लगानी गरेपछि के हुने हो कसो हुने हो भन्ने नयाँ निर्मातालाई लागेको होला भनेर जवाफ दिए हेमराजले ।
पार्टीको तामझाम नयाँ निर्माता फकाउन थियो कि पुरानालाई देखाउन ? तर, द ब्रेकअपले नयाँ बाटो भने अब लिएको छ ।